के ब्रान्ड वफादारी वास्तवमै मरेको छ? वा ग्राहक वफादारी हो? | Martech Zone
के ब्रान्ड वफादारी वास्तवमै मरेको छ? वा ग्राहक वफादारी हो?
सोमबार, डिसेम्बर 18, 2017 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
जब म ब्रान्ड वफादारीको बारेमा कुरा गर्छु, जब म मेरो कारहरु खरीद को लागी प्राय: आफ्नै कथा साझा गर्छु। एक दशक भन्दा बढीको लागि, म फोर्डप्रति वफादार थिएँ। मलाई शैली, गुणवत्ता, स्थायित्व, र फोर्डबाट खरीद गरेको हरेक कार र ट्रकको रिसेल मूल्य मनपर्‍यो। तर त्यो सबै एक दशक पहिले परिवर्तन भयो जब मेरो कार रिकल भयो।
जब तापक्रम जाडो र ओसको तापक्रम तल झर्दछ, मेरो कारको ढोका वास्तवमै खुला फ्रिज हुन्छ। अर्को शब्दहरुमा, एकचोटी तपाईले ढोका खोल्नुभयो भने तपाईले त्यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्न। धेरै asonsतुहरू खतरनाक रूपमा मेरो ड्राइभरको साइड ढोका बन्द गरिए पछि, मैले कार खरीद गरेको डीलरशिपले फेरि यसमा काम गर्न मानेन। मैले त्यो प्रतिनिधिलाई अविश्वसनीय रूपमा हेरेँ र उसलाई सूचित गर्यो वास्तवमा कहिल्यै स्थिर गरिएको छैन वर्षौंदेखि। प्रबन्धकले मेरो अनुरोधलाई अस्वीकार गर्‍यो र भन्यो कि उनीहरूले फोर्डको आवश्यकता अनुसार रिकल गरेका थिए र प्रत्येक चोटि कार ल्याउँदा मलाई चार्ज गर्नुपर्‍यो।
त्यो क्षण भन्दा पहिले, म ब्रान्डप्रति वफादार थिए। यद्यपि त्यो तत्काल परिवर्तन भयो जब मैले बुझें कि ब्राण्ड मप्रति वफादार छैन।
म अत्यन्त निराश थिएँ जसले मेरा फोर्डलाई सडकको पार गर्‍यो र कार ब्रान्ड नयाँ क्याडिलाकको लागि व्यापार गर्‍यो। केही महिना पछि, मैले फोर्ड खरीद नगरी मेरो छोराको कुरा गरें र उनले होंडा किन्। त्यसोभए, काममा १०० डलर भन्दा कमको लागि, फोर्डले २ ग्राहकको नयाँ कार बिक्री गुमाए भनेर आश्वस्त नगरी म ग्राहकको ख्याल राखिएको छु।
सबैजना सधैं प्रश्न गर्छन् कि गर्दैनन् ब्रान्ड वफादारी मर्यो। म विश्वास गर्दछु कि हामीले उल्टो सोध्नु पर्छ, हो ग्राहक वफादारी मरेको?
आजका केवल २ brand% ग्राहकहरू कुनै पनि ब्रान्डप्रति वफादार छन् किन? ठिक छ, हाम्रो औंलाको छेउमा इन्टरनेटको साथ, हामीसँग छनौटहरू छन्। कहिलेकाँही सयौं विकल्पहरू। समस्याग्रस्त ब्रान्डप्रति वफादार हुनु आवश्यक छैन, उपभोक्ताहरूले seconds० सेकेन्ड खर्च गर्न सक्दछन् र नयाँ ब्रान्ड फेला पार्न सक्दछन्। र हुनसक्छ एक ब्राण्ड जुन उपभोक्ताको व्यवसायको लागि बढी आभारी छ।
उपभोक्ताहरू किन एक ब्रान्डको साथ ब्रेक अप गर्छन्?
% 57% उपभोक्ताहरू ब्रान्डको साथ बिच्छेद हुँदा तिनीहरूको नकारात्मक समीक्षा unaddressed रहन जबकि समान उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्न जारी
Consumers 53% उपभोक्ताहरू ब्रान्डको साथ बिच्छेद हुन्छ जब यो भएको थियो डाटा लीक र डाटा उल्लंघन
%२% उपभोक्ताहरू ब्रान्डमा बिच्छेद हुँदा त्यहाँ छ कुनै प्रत्यक्ष / वास्तविक समय ग्राहक सेवा छैन समर्थन
%२% उपभोक्ताहरू ब्रान्डमा बिच्छेद हुँदा त्यहाँ छ कुनै समयमै बिक्री र पदोन्नतीहरू छैनन् वा प्रस्तावहरू
छुट र डिस्पोजेबल सामानको संसारमा, म विश्वास गर्दछु कि व्यवसायहरूले वफादार ग्राहकको मूल्यलाई बिर्सेका छन्। वर्षौं बर्ष, म व्यवसायहरूलाई उनीहरूको उत्पादन र सेवाहरूको लागि बढि नेतृत्व र अधिग्रहण गर्न मद्दत गर्दछ। जब उनीहरूले मलाई सोध्छन् कि उनीहरूले के गरिरहेका छन् राम्रोसँग, म प्रायः उनीहरूलाई उनीहरूको धारणा र वफादारी कार्यक्रमहरूको बारेमा सोध्न थाल्छु। यो मेरो लागि बौलाहा हो कि कम्पनीहरूले सयौं वा हजारौं डलर खर्च गर्न ग्राहक पाउनेछन्, तर तिनीहरूलाई ग्राहकको अनुभव इन्कार गर्नेछन् जुन त्यसको एक अंश खर्च गर्न सक्दछ।
एक एजेन्सीको रूपमा पनि, म मेरो धारणा रणनीतिमा काम गर्दैछु। जब मैले यस बर्षमा केही कर्मचारी टर्नओभर गरें, म ग्राहकहरूसँग केहि अपेक्षाहरू छुटाएँ। मैले ग्राहकहरू गुमाउनु भन्दा पहिले, मैले तिनीहरूसँग भेटें, उनीहरूको सम्झौता छुट दिएँ र हामी कसरी काम पूरा गर्न सक्दछौं भन्ने बारे विकल्पहरू प्रदान गर्दछु। मलाई थाहा छ एक ग्राहकको विश्वास प्राप्त गर्न कत्ति गाह्रो छ र जब यो जोखिममा छ, मलाई थाहा छ मलाई उठाउनु पर्छ र यसलाई ठीक बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ। यसले प्रत्येक पटक कार्य गर्दैन, तर यो निकास पाउनु र ग्राहकलाई देब्रे र दायाँ बदल्नु भन्दा धेरै राम्रो छ।
हामीले भर्खरै बोलस्ट्रामा इन्फोग्राफिक साझेदारी गरेका छौं ग्राहक वफादारी को ROI। ग्राहकहरू जस्तै उनीहरूको सफलताको प्लेटफर्महरू आन्तरिक स्टाफलाई शिक्षित गर्न, उपभोक्ताहरूलाई परित्याग गर्न लगाउने मुद्दाहरूको पहिचान गर्न, र तपाईंलाई तपाईंको ब्रान्डको नाफामा ग्राहकहरूको सफलताको प्रभाव नाप्न मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ। परिपक्व संगठनहरू देखिरहेका छन् कि उनीहरूको समग्र नाफा गम्भीर रूपमा प्रभाव पर्दछ जब उनीहरूको ग्राहक प्रतिधारण ड्रप हुन्छ। र बाल्टी भरी काम मात्र भइरहेको छ तपाईको पैसा समाप्त नभएसम्म - जुन हामी धेरै स्टार्टअपमा देख्छौं।
यहाँ रभ समीक्षाबाट पूर्ण इन्फोग्राफिक छ, ब्रान्ड लोयल्टी मरिसक्यो:
टैग: ब्रान्ड वफादारीब्रान्ड वफादारीको मृत्यु भएको छग्राहक वफादारीग्राहक सेवाग्राहकडाटा उल्लंघनडाटा चुहावटप्रत्यक्ष कुराकानीप्रत्यक्ष ग्राहक सेवाप्रत्यक्ष समर्थनवफादारी कार्यक्रमनकारात्मक समीक्षाराइभसमीक्षा समीक्षावास्तविक समय ग्राहक सेवाबिक्री र पदोन्नतीहरु
Ahrefs ले एक अविश्वसनीय नयाँ साइट अडिट उपकरण सुरुवात गर्‍यो